iFixit disassembles ọhụrụ 12-anụ ọhịa bilie gold MacBook | Esi m mac
Ọ gaghị ewe ogologo oge maka mpempe akwụkwọ ọhụrụ nke 12 nke anụ ọhịa MacBook iji si na otu iFixit bịa. N'ụzọ ezi uche dị na, Apple MacBook ọhụrụ ahụ yiri nke onye bu ya ụzọ banyere nrụzi enwere ike ị ga-arụ na igwe ahụ, ọ dị mgbagwoju anya. Ya mere, ndị ọkachamara otu nke iFixit dere MacBook 1 ọhụrụ n’ime 10 tupu mmezi enwere ike, bia, ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume imeghe onye ọrụ.
Akara a kwekọrọ na nke enwetara na disassembly nke gara aga mbipute, niile ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta niile mejupụtara ha na-glued na soldered na motherboard kọmputa (processor, ebe nchekwa, na flash mbanye). Tụkwasị na nke ahụ, ihuenyo nwere otu ngọngọ ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu nke na-egbochi anyị ime mgbanwe ya na akụ na ụba.
N'ihe banyere MacBook a, usoro ihe ọhụrụ nke isii, ndị DDR3 ụdị RAM na igwe eserese eserese eserese Intel HD Graphics 515, mee ka kọmpụta ahụ bụrụ ezigbo ihe ụtọ n'ihe gbasara ike na arụmọrụ. Ndị fọdụrụ na Mac yiri nke 2105 nlereanya ma e wezụga n'ihi ole na ole ihe: na kposara Phillips kachasị mmaỌ bụ ezie na ha na-ejigide klọọkụ Pentalobe na mpụga MacBook, na mgbakwunye ihe nkedo a na-atụ nwere ihe mkpuchi pụrụ iche iji mara ma ọ bụrụ na mmadụ emetọla ha ma ọ bụ na ọ bụghị ụba batrị, afọ a bụ 41,41 w * h.
Ugbu a ọ dịghị mfe ibukọta Apple Macs. Anyị nwere ike ịsị na ọ dịtụbeghị mfe ịmezi nrụzi na kọmputa ndị a, mana ọ bụ eziokwu na ndị ọrụ mbụ nwere ike gbanwee ma ọ bụ gbanwee ụfọdụ ihe akụrụngwa dị n'ime na nke a na-esiwanye ike ime. Ya mere nhọrọ nke ịhọrọ MacBook 12-anụ ọhịa na-aga site na iche echiche ogologo oge, nke mere na n'ime afọ ole na ole Mac dị na aka adịghị ada na ọrụ anyị. N'ebe a, anyị na-ahapụ njikọ kpọmkwem na nkwụsị nke ndị otu ahụ mere iFixit.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook » iFixit disassembles ọhụrụ 12-anụ ọhịa bilie gold MacBook